‘ग्ल्यामर बिनाको कला नुन बिनाको अचार जस्तै’ – शुभेच्छा थापा (नायिका) - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
‘ग्ल्यामर बिनाको कला नुन बिनाको अचार जस्तै’ – शुभेच्छा थापा (नायिका)
देशको मायाँ छातीमा टाँसेर हिँडेको छुु
नेपाली चलचित्र नगरीमा हट एण्ड सेक्सी नायिकाको रुपमा चिरपरिचित नायिका हुन् , शुभेच्छा थापा । उनी कहिले अर्धनग्न तस्विरका कारण, कहिले छातीमा नेपालको झण्डा ट्याटु खोपेको कारण त कहिले ढाकाटोपी अनि कहिले खादा लगाएर पनि विवादमा आइरहन्छिन् । समय अनुकुल आफूलाई अगाडी ल्याउन सफल सधै चर्चाको शिरमा रहिरहने नायिका शुभेच्छा जति विवादास्पद रुपमा देखिएपनि नेपाली रजतपटमा भने एकछत्र छाइरहेकी छिन् ।
गतबर्ष ढाकाटोपी लगाएर र खादाको बेइज्जत गरेको भनेर आरोप खेपेकी शुभेच्छा थापा यो बर्ष भनेर खुलेरै टोपीदिवसको समर्थनमा सडकमा उत्रिन । जसले जे भनोस् , म देशलाई अति नै माया गर्छु भन्ने नायिका थापाले देशको झन्डालाई छातीमा टाँसेर राखेकी छिन् । प्रस्तुत छ , उनै नायिकासँग नेपाली पोषाकको महत्व र उनको कलाकारिता यात्राको बारेमा नेपालपाटीका लागि जर्नाजन पौडेल र ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपीले गरेको कुराकानी:
गत साल ढाकाटोपी लगाएर खादाको अपमान गरेको भनेर निकै अप्ठेरोमा पर्नु भयो, तैपनि झनै यो बर्ष चौथो अन्तराष्ट्रिय टोपी दिवसमा खुलेरै मैदानमा उत्रिनु भयो नि ?
त्यतिखेर पनि मेरो बारेमा गलत हल्ला चलाइएको हो । मैले यो देशमा भएका कुनै पनि संस्कृति र पहिरनको विरोध पनि गरेको छैन,अपमान पनि गरेको छैन । खाली बुझाइमा मात्र फरक परेको हो । ढाकाटोपी,चौबन्दी चोली अनि खादा सबै हाम्रो समाज भित्रकै पहिरन र संस्कृति हुन ती सबैको उत्तिकै इज्जत गर्छु म ।
टोपी दिवसको दिन सडकमै उत्रिनुको कारण चाहिँ के थियो ?
हामिले हाम्रो मौलिक पहिचानलाई गुमाउनु हुन्न भन्ने बिचार लागेर र यसका अभियन्ता एवम आयोजकहरुले मलाई आउन निमन्त्रणा गरेका कारणले आएकी हुँ ।
हिजोआज तपाईंको चर्चा कम हुन थालेको हो ?
विल्कुल हैन, म चर्चामै छु जस्तो लाग्छ । अझ भन्नु पर्दा म चर्चा भन्दा बढी काम गरेर दर्शकको मन जित्न चाहन्छु । चर्चा नैं ठूलो कुरा होइन ।
पछिल्लो समय म एउटा भोजपुरी चलचित्र दिलवालेको काममा व्यस्त छु । ती लगायत केही अरु नेपाली सिनेमामा पनि काम गर्दैछु ।
एकाएक भोजपुरी सिनेमा तिर लाग्नु भयो नेपाली सिनेमा पाउन छाडेर त हैन नि ?
त्यसो होइन, नेपालभित्र बोलिने सबै भाषाका सिनेमामा खेल्नु पर्छ , सबैखाले अभिनय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेकाले भोजपुरी सिनेमामा अभिनय गरेकी हुँ ।
नेपाली भाषा बोलिरहेको लाई भोजपुरी भाषा कतिको अप्ठेरो भयो ?
सिक्ने इच्छा शक्ति भएपछि केही कुराले रोक्दो रहेनछ । हो मलाई भोजपुरी भाषा त आउन्नथ्यो तर त्यो टीममा काम गरिसकेपछि सजिलै सिकें ।
तपाइँ ग्ल्यामरबाट चर्चामा आउने नायिका । भोजपुरी चलचित्रका क्लिपहरु देख्दा झनै हट र सेक्सी रुपमा देखियो । के नेपाली दर्शकले यो सबै पचाउलान त ?
यो एक्काइसौ शताव्दिमा पचाउने नपचाउने भन्ने कुरा हुन्न । ग्ल्यामर बिनाको कला नुन बिनाको अचार जस्तै बन्न पुगेको छ । त्यसैले पक्कै मेरा दर्शकहरुले पचाउँछन पनि मन पनि पराउछन भन्ने मलाई लागेको छ । भोजपुरी चलचित्रबढी भल्गर हुन्छन् भनेर तपाईंले त्यसो भन्नु भएको होला । मेरो चलचित्र त्यस्तो खालको छैन । त्यो सब त प्रदर्शनमा आएपछि थाहा भइहाल्छ ।
सुटिङको क्रममा अप्ठेराहरु कत्तिको आए ? किनकी त्यसमा नयाँ नयाँ संस्कारहरु छन् , सबैलाई समेट्नु पनि पर्ला ?
अवश्य पनि गाह्रो र अप्ठेरो त भइहाल्यो । गाह्रो मान्ने हो भने त पस्केको भात खान पनि मान्छेलाई गाह्रो लाग्छ । म सँग मेरो को आर्टिस्टहरु हुनुहुन्थ्यो परदेशि साह , मैले उहाँहरुबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ । उहाँले बोलेको हेरी हेरी पनि बोल्थें ।
तपाइँ र परदेशी साहको जोडी सिनेमा भन्दा बाहिर नि निकै जम्यो भन्ने हल्ला पनि छ नि ?
त्यसो होइन उहाँ एकदमै मिलनसार हुनुहुन्छ । उहाँ भोजपुरी सुपरस्टार भएर पनि उहाँमा एकथोपा पनि घमण्ड छैन । त्यसैले कामको शिलशिलामा उहाँसँगको निकटता हो मेरो । अव सिनेमा भित्रको हाम्रो जोडीलाई दर्शकले कति मन पराउँछन त्यो चाहिँ हेर्नैं बाँकी छ ।
कतै भोजपुरी चलचित्रमा व्यस्त भएर नेपाली चलचित्रबाट चाहि टाढा हुने सोचमा त हुनुहुन्न ?
यसो छ, भोजपुरी मैथिली जुनसुकै भाषाको सिनेमामा अभिनय गरेतापनि त्यो सबै हाम्रै नेपाली दर्शकका लागि हो । बाँकी नेपाली चलचित्रबाट हराउने कुरा म नेपाली चलचित्रबाट हराउनै सक्दिन । किनकी मैले मेरो मन मुटुमा नेपाली दर्शक बोकेर हिँडेको छु । दिलवाले कै कुरा गर्ने हो भने दिलवाले नेपाली र भोजपुरी दुबै भाषामा निर्माण हुन लागेको चलचित्र हो ।
अन्त्यमा आफूलाई माया गर्ने मन पराउने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नेपाली चलचित्रको स्तर बढाउन र चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा परिणत गर्न नेपाली दर्शकको खाँचो छ । आजकाल नेपाली चलचित्रहरु स्तरिय र दर्शकको चाहना अनुरुप बन्न थालेका छन् । कृपया हलसम्म गएर नेपाली चलचित्र हेरिदिनुस भन्न चाहन्छु । साथै तपाईंको विश्वसनिय अनलाइन नेपालपाटी डटकम मार्फत आफ्ना कुरा दर्शक र स्रोतामाझ राख्ने मौका दिनु भएकोमा यहाँ र यहाँको टीमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।